IMISEBENZI NEZINDABA |
Umugqa Pendant isibani nge S14s futhi S14d kwaholela intambo komugqa tube isibani
Ukukhanyisa ngokwezifiso matte okumhlophe nokugcina okuphezulu nokuzizwa okunethezeka
Izindawo zokukhanyisa ngokwezifiso zeChicago Hotel
Leli hhotela lisedolobheni laseChicago elinomsindo. Lona irejista yemali. Kusukela ngomzuzu wokuqala ongena ngawo, uzozwa ukuthi ungene kwesinye isikhala. Kunezitayela ezimbalwa ezilula zezimboni, amakheli amancane, futhi lokhu kukhanya okufudumele kuthule futhi akunalutho. Leli ikhona lekhofi ...